अबको निकाश : मधेशीको सरकार | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
राजबिराज घटना पछि मैतीदेबी तिरका एक जना बृद्धा भन्दै थिए, अब यो देश चलाउन मधेशीलाई नै दिनुपर्छ । सामन्य नाङ्लो पसल गर्ने ती बृद्धाले मधेशका कोही पनि नेता चिनेका छैनन् रे, तर उपेन्द्र यादबको नाम भने सुनेका रहेछन् । यसैकारण उनले बर्तमान राजनीतिको गाँठो फुकाउने उपाय सुझाउँदै भने ‘अब देशमा उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ ।’
मैतीदेबीका नाङ्लो पसले बृद्धाको जस्तो यस देशका शासकहरुले सोचेका छन् कि छैनन् भन्न सकिन्न । तर देशको बिद्यमान राजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउने उपाय मध्ये यो पनि एक हो । किनभने नेपालको बहुजातीय मुलुकको निकास ठ्याक्कै यही नभएर यस्तैयस्तै चाही पक्कै हुनु पर्छ । उपेन्द्र यादबको ठाउँमा महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महत्तो हुन सक्छन् । अथवा बिमलेन्द्र निधि वा लालबाबु पण्डीत पनि हुन सक्छन् । अझ फराकिलो भएर भन्दा अशोेक राई, सुवास नेम्बाङ वा नारायणकाजीसम्म पनि हुन सक्छन् । तर देशमा कायम रहेको एकल जातीय पेवा पैकार भने अब बन्द हुनै पर्छ । एक जाती र एक बर्ग मात्र राज्यको सर्बोच्च कार्यकारी पदमा पुग्ने र पुर्याइने बर्तमान परिपाटी जतिसुकै सुनको जलपले टालटुल गरे पनि समाधान हुन सक्दैन । त्यसै पनि हामी सबै तहको निर्बाचनका लागि अन्तरिम सरकार बनाउनै लागेका छौ ।
नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भन्ने जान्दा जान्दै मधेश भन्ने बित्तिकै ‘भारतीय’ सोच्ने र दलित र जनजाति भन्ने बित्तिकै बुद्धि नभएको ‘स्वाठे’ ठान्ने दिन गइसक्यो।
यतिबेला देशको चित्र राम्रो छैन । हिजो त राम्रो थिएन नै । लोकतन्त्र आए पछि त झन डामाडोल भएर गएको छ । साम्प्रदायिक द्धेष र कलहको बिऊ उमारिएको छ । पहाडे र मधेशीको मात्र होइन थेप्चे र चुच्चेको बिबाद बढाईएको छ । देशको राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यको रोडम्याप सही भएन भने, यस्तै परिणाम हात पर्छ । अहिले नेपालमा भएको पनि यही हो । बर्तमान अवस्थाको सिर्जनाकार अरु होइनन्, बर्तमान सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका नेतागण हुन् । यीनीहरुले नै संविधानसभा आएपछि सबै कुराको समाधान हुन्छ भने । यीनीहरले नै जातीय छुवाछुत समाप्त हुन्छ भने । यीनीहरुले नै लोकतन्त्र आए पछि जातीय भेदभाव समाधान हुन्छ भन्ने नारा लगाए । तर परिणाम हाम्रो सामुन्ने छ । देशका नेताहरु एक भूगोलबाट अर्को भूगोलमा भ्रमण गर्न समेत असमर्थ भएका छन् ।
सप्तरी घटना एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्तो घटना हुन नहुने हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने वाक स्वतन्त्रता भएको, देशको संविधान र कानुनको परिधीमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने मुलुकमा एकले अर्कोलाई निषेध गरिएको हुँदैन । सप्तरी घटना एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । तर नेपालमा जे हुन नपर्ने भनिन्छ, त्यही भईरहेको छ । यो वातावरणको रचायिता को हुन् ? यसको रहस्य थाहा नपाएसम्म हाम्रो आँकलन र हाम्रो टिप्पणीको अर्थ खोलामा गीत गाउनु सरह हुन्छ । अहिले देशमा भईरहेको छ ।
नेपाली समाजमा राजनीतिक परिबर्तनलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोष नै साँघुरो छ । हाम्रो नागरिक समाज, नागरिक अगुवा,पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरु परिबर्तनलाई गणतन्त्रमा मात्र सीमित गर्न खोज्छन् । यसको जसको भागेदारहरु माओवादी र सात राजनीतिक दल मात्र हुन् भन्ने ठान्दछन् । तर यो परिबर्तनको आधारशीला कस्तो सामाजिक वातावरणबाट भयो भन्ने सन्दर्भमा चाही बिरोधाभाष टिप्पणी सुन्न सकिन्छ । वास्तवमा सामाजिक वातावरणले राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने हो र त्यस राजनीतिक शक्तिले सामाजिक वातावरणलाई जोगाउन सकेन भने त्यो शक्ति नभएर केवल सत्ता मात्र हुन्छ । नेपालको राजनीतिक दलहरु सामाजिक शक्तिलाई बाहेक गरेर राजनीतिक शक्तितर्फ मात्र अगाडि बढेकाले यो स्थिति आएको हो ।
हामी संक्रमणको कालमा छौ । संक्रमण भनेको तत्कालीन राज्यसत्ताको पुनर्गठनको संक्रमणको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा समाज र व्यक्तिगत जीवनमा पनि पुनर्गठनको चरित्र प्रतिविम्बन हुन्छ । हामी संक्रमणको कालमा छौ । संक्रमण भनेको तत्कालीन राज्यसत्ताको पुनर्गठनको संक्रमणको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा समाज र व्यक्तिगत जीवनमा पनि पुनर्गठनको चरित्र प्रतिविम्बन हुन्छ । यस्ता प्रक्रियालाई राज्यसत्ताले स्वभाविक रुपमा संरक्षण गर्न सक्नु पर्दछ । सप्तरी घटनामा राज्यसत्ता यहीनेर चुकेको छ । उस्ले एमालेको जनसभाको सुरक्षा त दिनु पर्दथ्यो नै, संगसंगै मधेशका सर्बसाधारणले असहमति राख्ने अवसर पनि दिनुपर्ने थियो । प्रतक्षदर्शीहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रेषित गरेका भिडियो फुटेजका आधारमा भन्ने हो भने सुरक्षाकर्मीहरु बढी उत्तेजित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । घरमा बसीरहेकाहरु, भाषण सुन्न आएका सर्बसाधारणहरुलाई पनि प्रहरीले खेदी-खेदी पिटेको छ । यदी सबै घटना त्यस्तै हो भने यो मानवअधिकारको गंभीर उलंघन र मधेशी नागरिक बिरुद्धको अपमानजनक दुव्यबहार हो ।
राज्यलाई जानकारी नभएको होइन, नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलन सामन्य दाल चामलको आन्दोलन होइन । देशको मूल कानुन संविधान र यससंग सम्बन्धीत बिभेदकारी प्रावधानको खारेजीसंग सम्बन्धीत छ । यस्तो आन्दोलन लुकीछिपी गरिएको पनि होइन । यसबारे सम्बद्ध राजनीतिक दल तथा अभियानकर्ताहरुले परोक्ष र अपरोक्षरुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । बर्षौसम्म उत्पीडन सहेर बसेका र राज्यको मूलप्रबाह र अवसरबाट बन्चित समूदायले आफनो बिद्रोहको अभिव्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारले अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने कुरा सबैमा जगजाहेर भएको बिषय हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरुको बिरोध गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने थियो । यहीनेर राज्य चुकेको छ ।
मधेशीलाई राष्ट्रियताको पाठ कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन । उनीहरु नै नेपाली सीमाका रक्षक र नेपाली माटोलाई उर्बर बनाउने कर्मशील नागरिक हुन् । यसैले देशको नव निर्माणमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम तथा दलितहरुको सहभागितालाई उच्च प्राथामिकता दिने नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने बेला आएको छ । यही घडी हो जहाँबाट हामी राष्ट्रिय एकताको शुभराम्भ गर्न सक्छौ । त्यो भनेको मधेशबादी दलको नेतृत्वमा अबको सरकार गठन गर्नु । यदी मधेशबादी दलका नेताको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन गर्न सकिएको खण्डमा हामीले भोगेका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक क्रान्तीपछि आन्दोलनकारीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ साल यसको साक्षी छ । यसो गर्नका लागि मूलधारका राजनीतिक दलको खुला तथा उदार भावना र समयलाई सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि हामी संविधान कार्यन्वयन र संक्रमणकालको चेपुवामा छौ ।
बुधबार २५ फाल्गुन, २०७३ ।
4 Comments for “अबको निकाश : मधेशीको सरकार”
April 12, 2017 - 11:31 am
hTh8RP Very good article.Really looking forward to read more. Will read on
December 20, 2017 - 5:27 pm